Abenzi baseChina abenza ubhaka ngokwezifiso, Abahlinzeki, Ifektri - Ikhotheshini - I-Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Ikhaya > Ojosaka > Ubhaka wangaphandle > Ukupholisa ubhaka
(1) 600D eyenziwe e-Oxford (2) Insulation kanye nojosaka wasesiqandisini: Izinto zokushisa ezishisayo ngaphakathi kwesikhwama sokupholisa kanye nolwelwesi oluvuzayo zisebenza ndawonye ukuqinisekisa ukuvimbela ukuvuza nokugcina ukudla kushisa futhi kubanda amahora ayi-16. (3) Ukuphola komthamo omkhulu: 13.0 amayintshi x 7.5 amayintshi x 15.8 amayintshi / 33 cm x 19 cm x 40 cm (ubude x ububanzi x ukuphakama), isisindo: 1.1 lbs / 500 g, ingabamba amathini afinyelela kuma-30 (330 ml), Unokwanele isikhala sokuhlangabezana nazo zonke izidingo zakho. (4) Amaphakethe amaningi: Igumbi lokugcina elikhulu elibanzi eli-1, amaphakethe ama-2 anezikhala ezinhlangothini, amaphakethe ama-zipper amabili angaphambili okugcina izitsha, iphakethe le-zipper eli-1 (elimboziwe), iphakethe le-1 mesh kanye ne-1 yebhodlela lokuvula ibhodlela.
I-Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. yasungulwa ngo-2003.Ibhizinisi lethu eliyinhloko ukuklanywa, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwemikhiqizo yobhaka, njenge: ojosaka be-laptop, izikhwama zesikole zabafundi, izikhwama zesikole, izikhwama ze-diaper, ojosaka bangaphandle, ojosaka bezemidlalo, ama-rucksacks, izikhwama zesikole zekhathuni neminye imikhiqizo. Ngasikhathi sinye, siphinde sandise amanye amabhizinisi, njengokuklanywa kokuklama: izikhwama zebhande, izikhwama ze-duffel, izikhwama, izikhwama zamathuluzi, izikhwama zasemini, izikhwama zesibhamu, izikhwama zamasosha ezempi, izikhwama zezilwane neminye imikhiqizo. Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zamakhasimende ngazinye, sesisungule nomnyango ozosiza amakhasimende athole ezinye izigaba zezimpahla eChina. E-China, sine-supply chain eqinile futhi evuthiwe engenhla neyaphansi. Lokhu kuyinzuzo yethu eyinhloko eyinhloko. Ngenxa yalolu sizo, singawahlinzeka wonke amakhasimende ethu ngokushesha, kangcono nangcono, futhi sinikeze amakhasimende ethu ukusebenza kahle kwezinsizakalo zokwenziwa koMkhiqizo, singaphinde sinikeze ngemikhiqizo yethu yekhwalithi ephezulu esezingeni eliphakeme kumakhasimende athengiswayo. Abasebenzi bethu abangama-600 nemishini yokukhiqiza engama-500 yizimpahla zethu ezinkulu. Sikugcina kanjani isikhundla sethu sokuhola? Sibeka phambili ukuxhumana phakathi kwabantu, futhi sibeka kuqala ukuvikela amalungelo abantu abasebenzi kanye nokuvikela amalungelo amakhasimende. Indawo yokusebenzela engamamitha-skwele ayi-18,000 isivumela ukufaka izinto zokukhiqiza eziningi kanye nabasebenzi bokukhiqiza, futhi sinikeze izinsizakalo kumakhasimende kusuka ekwakhiweni komkhiqizo, ukukhiqizwa kwesampula, ukukhiqizwa ngobuningi, ukuthuthwa kwempahla, kanye nesimemezelo samasiko. Uma udinga ukwenza ngezifiso imikhiqizo yobhaka noma ukumela umkhiqizo wethu, sicela uxhumane nathi:adamdavis@fofrerbag.com
1. Ukupholisa ubhaka product introduction:
(1) 600D eyenziwe e-Oxford
(2) Izinto zokuvala umoya kanye nojosaka wasesiqandisini: Izinto zokufudumeza ezishisayo ngaphakathi kojosaka wokupholisa kanye nolwelwesi oluvuzayo zisebenza ndawonye ukuqinisekisa ukuvimbela ukuvuza nokugcina ukudla kushisa futhi kubanda amahora ayi-16.
(3) Amandla apholile amakhulu: 13.0 amayintshi x 7.5 amayintshi x 15.8 amayintshi / 33 cm x 19 cm x 40 cm (ubude x ububanzi x ukuphakama), isisindo: 1.1 lbs / 500 g, angabamba kuze kufike kumathini angama-30 (330 ml) , Yiba nesikhala esanele ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zakho.
(4) Amaphakethe amaningi: Igumbi lokugcina elikhulu elibanzi eli-1, amaphakethe ama-2 ohlangothini anezikhala, amaphakethe ama-zipper amabili angaphambili okugcina izitsha, iphakethe le-1 uziphu (embozwe), iphakethe elilodwa lemeshi kanye ne-1 yebhodlela lokuvula ibhodlela.
(5) Esilula futhi esiqinile: senziwe ngendwangu engenamanzi futhi ehlala isikhathi eside, ubhaka omncane osindayo opholile, ungasetshenziselwa umsebenzi, amapikiniki, uhambo lomgwaqo / lolwandle, ukuhamba izintaba, ukukhempa, ukuhamba ngebhayisikili, kwenzelwa abesilisa nabesifazane Isipho esihle.
(6) Imisebenzi eminingi: Umklamo wesitayela wokulondolozwa kokushisa nokupholisa ubhaka wenza ukuthi ungasetshenziswa njengobhaka wasemini noma ubhaka wansuku zonke. Ilungele isidlo sasemini, ipikinikini, umsebenzi noma uhambo.
(7) Noma ngabe unentshisekelo ohambweni lomgwaqo / lolwandle, amapikiniki noma ukuvakasha kwansuku zonke, okupholile kojosaka we TOURIT ungumlingani wakho omkhulu wemisebenzi ehlukahlukene yangaphandle.
(8) Ukuqinisekisa ukuthi uzizwa unethezekile futhi uyathwala, sinake kakhulu izintambo ezigxiliwe zamahlombe nangemuva kojosaka ongafakwanga.
(9) Idizayini eyakhiwe kahle yesikhwama sethu sangemuva esenziwe ngocwazi ikwenza futhi ukuthi isetshenziswe njengobhaka wasemini noma ubhaka wansuku zonke.
(10) Ngalesi sikhwama esipholile esikhwameni, ungachitha usuku oluhle nomndeni wakho futhi nikujabulele ukuphuza olwandle noma esikebheni.
2. Ukupholisa ubhaka product parameters (specifications)
Ukusetshenziswa kokuhamba amabanga amade
Indwangu ye-Oxford engangenwa ngamanzi eyi-900D
Ingakhiqizwa ngokushintsha izinto njengoba kudingeka
Kuqondile ubhaka wesikwele
Ubude 40cmX Ububanzi 33cmX Ukuphakama 19cm
Usayizi ungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo
Umkhiqizo owodwa esikhwameni esisodwa sepulasitiki se-PE, ama-PC ayi-10 / ibhokisi
Indlela yokupakisha ingakhiwa ngokuya ngezidingo
Uhlobo lomkhiqizo olusebenzayo
3. Uyini ubhaka wokupholisa?
(1) Ubhaka wasefrijini oshubile, owaziwa nangokuthi ubhaka opholile, ubhaka wesitayela ubhaka onendawo enkulu yangaphakathi yokushisa, okungagcina iziphuzo nokudla kushisa okuphansi isikhathi eside.
(2) Akulula kakhulu, kulula ukuwaphatha, futhi angasetshenziswa cishe kunoma yikuphi ukuvakasha kwangaphandle noma umsebenzi omude. Lapho ungeke ukwazi ukusebenzisa ifriji noma ifriji, lena indlela enhle yokuqinisekisa ukuthi konke okuphethe nawe kuhlala kukusha.
4. Yimiphi imisebenzi okufanele uyibheke ekulondolozeni ukushisa nobhaka opholile?
(1) Lapho uthenga ubhakha ongafakwanga futhi opholile, kufanele uqale uqinisekise ukuthi ufakwe ngocwazi ngempela futhi unendawo eyanele yokugcina zonke izinto ozidingayo.
(2) Abanye ojosaka bokupholisa basebenzisa umklamo wokwehlukanisa, lapho uhlangothi olulodwa kuphela lufakwe khona ngci, kanti olunye uhlangothi lufudumele ekamelweni.
(3) Lokhu kusiza kakhulu kubantu abaphatha ezinye izinto ezingonakali (njengama-laptops, izincwadi zokufunda, amathoyizi ezingane, njll.). Lokhu futhi kuyinzuzo lapho ubhaka opholile unamaphakethe wokugcina iziphuzo ngisho nangaphandle.
(4) Olunye udaba olubalulekile okufanele lubhekwe isisindo (okungukuthi, ingaphakathi aligcwele ithani). Njengobhaka abajwayelekile, ojosaka abapholile bavame ukuba nesisindo esiphakathi kwamakhilogremu ama-4 kuye kwayi-10, kepha ngenxa yezindawo zabo zokuvikela, bavame ukusinda ngaphezu kojosaka abajwayelekile abangafakwanga.
(5) Kubalulekile ukuthi ubheke ukuthi uhlela ukupakisha malini esikhwameni sokupholisa ukuze ube nokuqonda ngesisindo ngesikhathi usohambweni. Induduzo iyisihluthulelo, ikakhulukazi izikhwama ezithwalwa emhlane wakho nsuku zonke.
(6) Ukusho okuncane, kukhona ojosaka abaningi kakhulu abangafakiwe emakethe kangangokuthi inqubo yokuthenga ingahle ibe nzima. Silapha ukukusiza. Lokhu kungukukhethwa kojosaka abangcono kakhulu be-insulation kanye nokupholisa emakethe.
(7) Kodwa-ke, singakwazi ukuklama nokukhiqiza imihlahlandlela ebalulekile eyisi-6 yokukhetha ojosaka bokupholisa.
6. Ukupholisa ubhaka packaging and delivery
(2) Usayizi wephakeji ozenzakalelayo owodwa: 40cm X 33cm X 19cm, singenza ngokwezifiso usayizi wephakeji yokuklama ngokuya ngezidingo zakho, ukuze sikusindisele impahla.
(3) Ukupakisha sebhithi: 43cm X 35m X 50cm. 10PCS / ibhokisi. Impahla yekhathoni: K = K iphepha elincane likathayela elino-5-layer.
(4) Isisindo esikhulu sebhokisi lonke: 8Kg.
(5) Isisindo sisonke sebhokisi lonke: 6.5Kg.
(7) Singakha indlela yokupakisha engabizi kakhulu, kepha lokhu kuzodela ezinye izinto futhi kungadala ushintsho ekubukekeni komkhiqizo. Ngokuvamile asincomi amakhasimende ukuthi asebenzise le ndlela.
(8) Uma kunesidingo, sizoklama indlela yokupakisha yalesi sikhwama sokupholisa ngokuya ngezidingo zakho
(9) Uma udinga isampula lalesi sikhwama sokupholisa, sizokhetha ukukuthumela kuwe ngendiza.
(2) Sizoxhumana njalo amahora angama-24. Sizosebenzisa ukuxhumana okuphumelelayo ukuqinisekisa ukuxhumana kwemininingwane ebushelelezi.
(3) Ngemuva kokuthi isampula selithengisiwe, uma inguqulo yokuqala idinga ukuguqulwa, sizoguqula isampula ngokuya ngemininingwane yokuguqulwa. Yonke inqubo yokukhiqiza inguqulo yesibili yesampula imahhala ngokuphelele.
Q1. Ingabe uyimboni noma ungumhwebi?
Q2. Siyini isikhathi sakho sokuhola sokukhiqiza ngobuningi?
Ngokwezinga lobuchwepheshe bokukhiqiza nobunzima bemikhiqizo eyenziwe ngezifiso, lungisa umjikelezo wokukhiqiza ongenhla. Udinga ukubheka izithombe noma amasampula ahlinzekiwe ukunquma umjikelezo wokukhiqiza onembile
Q3. Isikhathi sakho esingakanani ukukhiqizwa isampula phambili isikhathi? Ingabe unikeza amasampula? Ingabe kumahhala noma kuyengeziwe?
(1) Singakunikeza amasampula amahhala, kepha udinga ukukhokha imali ebonakalayo evela eChina iye ezweni lakho
(2) izinsuku ezingu-7-10 zokusebenza zamasampuli enziwe ngezifiso, amahora angama-48 amasampula amabala
Q4: Uyini umkhiqizo wakho wokukhiqiza ngobuningi?
(1) Ubhaka wethu olula ukhiqiza izingcezu ezingama-50,000 ngosuku nezicucu eziyi-1,500,000 ngenyanga
(2) Okobhaka abanobuciko obuyinkimbinkimbi, okukhishwa nsuku zonke kwamayunithi angama-3,000 kanye nokukhishwa kwanyanga zonke kwamayunithi ayi-100,000
Q5. Isikhathi sakho esingakanani ukukhiqizwa isampula phambili isikhathi? Ingabe unikeza amasampula? Ingabe kumahhala noma kuyengeziwe?
Q6: Uyakwamukela ukuhlolwa komuntu wesithathu? Ungakwazi yini ukunikeza imibiko yokuhlolwa komkhiqizo? Injani ikhwalithi yokukhiqiza kwakho?
(1) Yebo, siyakwamukela ukuhlolwa komuntu wesithathu
(2) Umbiko wokuhlolwa komkhiqizo unganikezwa
(3) Singumkhiqizi wojosaka bokupholisa beDisney, izikhwama zeWal-Mart, nemikhiqizo yakwaSamsonite. Sicela uqiniseke ngekhwalithi yokukhiqiza.
Q7. Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi uxhumane futhi uphendule?
Q8. Iyiphi indlela yokucaphuna oyamukelayo? Zingaki izinsuku zesikhathi sokucaphuna?
(1) Thatha ikhotheshini yesithombe somkhiqizo, ucaphune ngokusalungiswa komklamo womkhiqizo, bese ucaphuna ngokwesampuli enikeziwe
(2) Umjikelezo womkhiqizo owodwa wokucaphuna ungamahora ayi-12, kanti umjikelezo we-batch quotation izinsuku ezingama-2-3
(3) Indlela yekhotheshini: intengo yangaphambili yefektri, i-FOB, i-CIF
(4) Uma udinga ikhotheshini, sicela uqaphele indlela yekhotheshini, esivumela ukuthi sikucaphunele kangcono
I-Q9: Awufuni ukwakheka kwethu komkhiqizo, ungenza futhi ukhiqize ngokusho komdwebo wami wokuklama?
Q10. Yimiphi imigomo yakho yokukhokha?
A: <= 1000USD, 100% yokukhokha kusengaphambili
Q11: Unawo umkhawulo we-MOQ?
Amathegi ashisayo: Ukupholisa ubhaka, China, abenzi, abahlinzeki, ifektri, okwenziwe ngokwezifiso, intengo, ikhotheshini, kusitoko